Garowe: Wasaaradda haweenka oo tababar u furtay haween ka kala yimid laamaha waaasaradda ee gobollada Puntland. – Radio Daljir
Garowe: Wasaaradda haweenka oo tababar u furtay haween ka kala yimid laamaha waaasaradda ee gobollada Puntland.
Garowe, Mar 20 – Wasaaradda Horumarinta haweenka iyo arimaha qoyska Puntland ayaa maanta Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland tababar uga furtay Haween ka kala yimid gobolada puntland, kuwaasi oo muddo kooban looga faa’idayn doonno aqoon la xiriirta hormarinta bulshada.
Haweenka maanta wasaraddu tababarka u furtay ayaa gaarayey illaa 40 xubnoon oo ka kal yimid dhammaan xafiisyada ay wasaaraddu ku leedahay gobollada Puntland, xubno ka tirsan ururrada haweenka iyo xildhibaannada golayaasha deegaanka ee degmooyinka kala duwan ee Puntaland gaar ahaan kuwooda dumarka ah.
Ka-qayb-galayaasha tababarkaan ayaa muddada uu socdo uga faa’idaysan doono aqoon dheeraad ah oo ku saabsan habka horumarinta arrimaha bulshada, taas oo lagu hanweyn yahay mark ay ku laabtaan degmooyinkii iyo gobolladii ay ka yimaadeen in ay ka wadaagaan bulshadooda waxna ugu qabtaan.
Furitaanka tabarkaan waxaa ka soo qayb-galay mas’uliyiin kala duwan oo u badnaa kuwa wasaaradda horumarinta haweenka, ayna ka mid ahayd wasiirka wasaaraddaasi Marwo Caasho Geelle Diiriye, oo furtaankii tababarkaasi ka jeedisey khudbad ay badankeeda kula dardaarantay haweenkii loo qabtay, iyadoo u soo jeedisay haweenku in ay la yimaadaan wax-qabad iyo dadaallo wax-ku-ool ah oo suurto-galin kara in lagu aamino, bulshadoodana ay kaga dhex-muuqdaan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Siciido Xuseen Cali, oo iyana goobtaas hadal kooban ka jeedisay, ayaa sharraxaad ka bixisey micnaha ugu weyn ee tababarkaani uu huwan yahay, iyadoo dhanka kala xustay tallaabooyinka wasaaraddaasi ay u qaaday xagga hormarinta haweenka.